Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez oo amaan kala dul dhacay Ramos, muxuuse ka yiri mustaqbalkiisa kooxda? – Gool FM
(Madrid) 13 Okt 2019. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Florentino Perez ayaa amaaney kabtanka Sergio Ramos, kaddib markii uu noqday ciyaaryahanka ugu safashada badan taariikhda xulka qaranka Spain.
Ramos ayaa wuxuu jabiyay rikoodhka saaxiibkiisii hore ee Iker Casillas, kulankii xalay ay Norway ku kala baxeen barbaro 1-1 ah, kaasoo ka tirsanaa Isreebreebka koobka Euro 2020-ka.
Haddaba Madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Florentino Perez ayaa wareysi uu ku bixiyay “TVE” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Ramos waa hogaamiye weyn ee hami badan, sidoo kale marka lagu daro awoodiisa ee aan dhamaanteen ku aragno oo isugu jirta farsamo iyo jir ahaanba”.
“Waxaa jira waxyaabo kale oo isaga ka dhigay halyeey, kaliya ma ahan Real Madrid iyo xulka qaranka Spain, laakiin kubadda cagta ee adduunka”.
“Dhamaan awoodahan oo dhan waxay baaqi ku ahaan doonaan isaga, sida inuu ku gudi jiro bilowga xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, waana ku qanacsanahay in halyeeyga Ramos uu sii wadan doono Real Madrid”.